Ukusetshenziswa kwe-aluminium emzimbeni
I-Aluminium ibe yinto enhle kakhulu kwabanye abenzi bezimoto. Izimoto ezinemizimba ye-aluminium zinamandla amakhulu okuthuthukisa umnotho wamafutha, ukumelana nomthelela nokusingathwa. Abathengi abaningi bezimoto emhlabeni jikelele babona ikusasa lezidumbu ze-aluminium futhi bakholelwa ukuthi lokhu okusetshenziswayo kuzothuthukisa ukuthuthukiswa komkhakha wezimoto.
I-aluminium ipuleti yakhiwa ngendlela efanayo neplate yensimbi, ifudumeza induku iye kuma-Celsius angama-538 bese igoqa phakathi kwalaba bobabili abayinikezayo ukuze ibaneke ifulethi. Kusukela kulo mzuzu kuqhubeke, lokhu kulungiselela kokuqala kuzokwenziwa ngezindlela eziningi, kungaba ngaphansi kolamula kuya esikhaleni noma njengezinto zokwenza izimoto, inqubo iyafana, umehluko kuphela ukushintshwa kwamakhemikhali. Izinsimbi zokukhanya ezisetshenziswa embonini yezimoto zingaqukatha ama-aluminiyamu angama-15 ahlukile bese ziqiniswa ngethusi nange-silicon.
I-aluminium akulula ukuyidonsa. I-alumina engaphezulu kwendawo ingamunca kalula igesi, ngaleyo ndlela ibambe igebe ku-weld, ngaleyo ndlela yenze buthaka i-weld. Esikhundleni salokho, amapuleti e-aluminium ayesebenzisa ukubopha okuqinile okuqinile nokuzingena ngokwakho.
Ngokuthuthuka kwezobuchwepheshe, abathengisi bezimoto baphendukele ezinqubweni ezintsha, bahlanganisa kabusha imigqa yomhlangano, bathatha indawo yokufudumala ejwayelekile ngohlobo olusha lwe-laser welding, bafaka izigidi zamaRandi ekuvuseleleni umgudluli. I-Rivet yinto entsha nedala, lapho ikhethini selifakiwe emotweni, inqubo yokufaka insimbi isiphambukile kumasimu amaningi wesicelo kulayini womhlangano.
Babhoboza insimbi ngaphandle kokushisa, izinhlansi kanye nensipho. Kepha bayozivikela ngokuqinile lezo zinto ngokufaka ama-welding amabala, bathenge imishini entsha ngentengo ephansi, babuye bavuselele umugqa wensimbi wamarobhothi abizayo. I-Riveting inenye inzuzo ebalulekile: irobhothi linganquma kalula ukunemba kwesikhundla se-rivet, esinomthelela omuhle kakhulu kwikhwalithi yomsebenzi. Lungisa ama-fasteners alezi zinto ngokumba izimbobo kumapuleti amaningi we-aluminium futhi uwahlomise ndawonye ngenqubo. Isikulufa sizokhipha ukushisa phakathi kwenqubo yokujikeleza futhi lapho izingcezu eziningana zezinto zidlula, futhi ukufudumala kuzobangela ukuthi insimbi ikhule. Njengoba ipholisa, umgodi uyancipha, uqinise izikhonkwane, futhi wakhe ukuxhumana okuqinile. Lobu buchwepheshe be-Fastener busetshenziswa ikakhulukazi ngabazenzisi baseYurophu. Izinzuzo zayo zishibhile, zilula, futhi azidingi ukufaka imishini entsha ebizayo.
Njengoba i-aluminium ingenazibuthe, izinkampani zezimoto kufanele zibuyisele imishini yazo yomhlangano. Sebenzisa i-vacuum grip esikhundleni se-magnetic grip ukuthwala izingxenye ezenziwe ngensimbi. Ngaphezu kwalokho, izinzuzo zokukhiqizwa kwezimoto ze-aluminium ziye zaphawulwa, kunciphisa izinxushunxushu emhlanganweni wokucobelelana ngolwazi ngezinto zokusebenza. Uma kuqhathaniswa ne-welder clumsy welder egxile kuyo, imishini yokusebenza kwe-aluminium icompact xaxa. Isikhala esithe xaxa, umsindo omncane. Kuba lula ukuthi onjiniyela basebenze efektri ngaphansi kwezimo ezinjalo.